Porous Metal, iru mmiri na okpomọkụ ihe mmetụta, igirigi Point Transmitter, iru mmiri mita, Sintered igwe anaghị agba nchara Myọcha, mgbasa mgbasa Stone, Porous Sparger, Flow machibido - HENGKO
Sintered Porous Metal Nzacha
Igwe anaghị agba nchara Myọcha iko
Powder Sintered Porous Metal Myọcha Ihe
Sintered Ọla Myọcha
Ikuku Muffler Silencer
Temp Humi IOT Cloud Ngwọta
Iru mmiri Temp Meter Logger
Iru mmiri mmetụta ụlọ
Nkume Carbonation Car Beer
Afọ Diffuser Ikuku Nkume
Mgbakọ Gas Gas
Dlọ ihe mmetụta gas
Mgbakọ Assembly Gas Gas
Atọ aro ka akwadoro
igirigi ihe nyocha iru mmiri
tem & iru mmiri ihe nyocha
iru mmiri mmetụta porous ụlọ
carbonation nkume oxygen diffuser
sintered igwe anaghị agba nchara nzacha
igwe anaghị agba nchara iyo tube katrij
igwe anaghị agba nchara diski nzacha
multilayer sinter igwe anaghị agba nchara iyo
sintered ọla kọpa nyo mmewere
gas ihe mmetụta porous ụlọ
gas ihipu ihe nyocha ulo
Hụ More. . .
HENGKO Technology Co., Ltd. bụ a elu-tech emeputa lekwasịrị anya R & D, imewe na-eme nke sintered porous metal anaghị agba nchara nyo ihe onwunwe, carbonation diffuser, okpomọkụ iru mmiri mita mmetụta nyocha na gas detector porous ụlọ wdg Anyị na-agba mbọ iji na-enyere ndị ahịa iji dozie nsogbu dị elu na nsogbu siri ike na nzacha, iru mmiri na ụlọ ọrụ nchọpụta gas.
HENGKO a siri ike quality management usoro iji hụ na ngwaahịa na adịchaghị mma, kachanụ nkenke, siri anya, ọtọ iche iche, dị iche iche ihe nakawa etu esi na oké ọnụ price. Site na ndị ọrụ R & D ndị nwere nkà na ngwa ngwa na ngwa ngwa nyocha, anyị nwere ike ịmepụta ihe ngwọta akọwapụtara nke ngwa nke ọrụ, akụkụ, ihe, akụkụ maka ndị ọrụ.
gịnị kpatara hengko
IHE DR Ike
19 Afọ OEM n'ichepụta ahụmahụ;
Ọkachamara & pụrụ iche mmepụta crafts;
Ihe karịrị 100K
ụdị maka nhọrọ.
Ghọta ndị ahịa nwere ụkpụrụ ịzụta dị mma ogologo oge;
Ihe karịrị afọ 10 nke usoro imekọ ihe ọnụ mmekọrịta ọtụtụ ahịa.
Mezue usoro ISO9001: 2015 management system;
All ngwaahịa na-100% nyochara;
Usoro njikwa usoro siri ike na ọkwa ụlọ ọrụ mbụ.
Idebe mkpa ndị ahịa; Ofụri Esịt na-akwado ndị ahịa;
Inyere ndị ahịa aka ịzụlite uru asọmpi ka ukwuu;
ma bụrụ ụlọ ọrụ na-adị ogologo oge.
HENGKO iru mmiri nyocha (I2C mmepụta) Industrial iru mmiri Transmitter
Usoro HT-E062 jikọtara iru mmiri na nyocha ihu igwe na-adabere na arụmọrụ dị elu na nkwụsi ike RHT3X modul nke Sensirion mere. Nyocha nwere ihe nzacha iji p ...
HENGKO 316 micron igwe anaghị agba nchara ikuku aerator nkume mgbasa mgbasa eji microalgae photosynthesis
Ndị na-emepụta mmiri ozuzo bụ 'mgbidi' nke ọkpọkọ jupụtara na mmiri nke na-enye ohere ka photosynthesis, ebe microalgae na-etolite na mgbakwunye carbon dioxide. Na bioreactors, ezigbo uka nyefe ...
Internet ihe (IoT) ihe ngwọta griin haus na iru mmiri ihe omimi maka griin haus orchid
Orchids chọrọ ụfọdụ ọnọdụ okpomọkụ na ọnọdụ iru mmiri ka ha too ma oge ntoju, oge okooko ha nwere ike ọ gaghị adaba na mkpa ahịa, ya mere ...
H&T iru mmiri na okpomọkụ Ikuku digital Smart mmetụta kọmpat Hygrometer Nyochaa Industrail akpaaka iru mmiri calibrator
Ebumnuche ndị ejiri igwe rụọ iji rụọ ọrụ na nyocha. Ngwaọrụ nwere ọtụtụ njirimara onye ọrụ na ọtụtụ nhọrọ pa ...
Okpomọkụ na iru mmiri nyochaa maka ngwa IoT HT-802P iru mmiri
Emere HT802P nyochaa iji tụọ, nyochaa ma dekọọ ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri. Ọ bụ azịza zuru oke maka ụlọ ọrụ ọ bụla ebe nlekota oru ...
Ime ụlọ Iot Smart Plant Monitoring & Control Platform - Too Ime ụlọ iru mmiri (RH) na okpomọkụ maka ime ụlọ osisi
Ngwọta Atụmatụ IoT Smart Plant Monitoring & Control Platform na-enyere ndị ọrụ ugbo aka belata oke ọrụ ma melite ụkọ manpower, na-eji n'ihu-en ...
IOT ngwugwu maka okpomọkụ ma na iru mmiri Data Logger na batrị maka Cold-yinye Transportation Vaccine
Smart oyi yinye logistics ngwọta na-enyere azụmahịa gị ịnọgide na-ekwenye ekwenye, nweta ngwaahịa mma na njikota arụmọrụ arụmọrụ. Ezigbo, refrjiraeto na-enweghị ike ...
Uru ahụike - Alkaline na-arinụ mmiri na-a Alkụ mmiri nke mmiri Alkaline
Mmiri hydrogen dị ọcha, dị ike ma nwee hydron. Ọ na - enyere aka ịme ka ọbara dị ọcha ma mee ka ọbara na-agagharị. Ọ nwere ike igbochi ọtụtụ ụdị ọrịa ma melite ahụike ndị mmadụ. ...
Hydrogen mmiri Myọ Alkaline Hydrogen Mmiri Generator Hydrogen Rich Water Onye kere
You chọrọ igbu oge ịka nka ka ị ghara ịka nka? Chọrọ imezi ahụ ike ịrịa afọ? Youchọrọ ime ka nguzogide ahụ sikwuo ike iji nwee ọnọdụ uche dị mma? Ị nwere ...
Elu okpomọkụ ikwu iru mmiri / okpomọkụ Transmitter, na Remote nyocha
√-40 ka 200 Celsius C (-40 ruo 392 Celsius F) ratingrụ Ọrụ √ Nyocha Igwe anaghị agba nchara (gụnyere) √ 150 mm (5.9 ″) Long-Mounted Probe √ 150 mm (5.9 ″) Long ...
Handheld Online ikwu iru mmiri Dewpoint Mita HK-J8A103 maka ntụpọ-achọpụta ngwa
Handheld Dewpoint Meter HK-J8A103 maka ntụpọ-achọpụta ngwa na ubi mmezi awade ezi na ngwa ngwa mmesho maka ulo oru igirigi ebe ngwa, dị ka labora ...
RS485 / MODBUS-RTU HT-800 Series Environmental okpomọkụ na iru mmiri mmetụta Nchọpụta, -30 ~ 80 ° C, 0 ~ 90% RH
HT-800 usoro okpomọkụ ma na iru mmiri transmitter adopts SHT usoro okpomọkụ na iru mmiri ihe mmetụta dị si Switzerland Sensirion, nke nwere ike ịnakọta okpomọkụ na iru mmiri da ...
sintered bubbler maka omenala arịa, sintered igwe anaghị agba nchara 316 porous metal iyo
A na-ahazi nzacha dị elu na spargers iji mezuo ihe ndị siri ike maka iwepụ ihe ndị dị na gas, dịka ọmụmaatụ, ngwa semiconductor. Nke ...
Sintered sparger tube na porous metal igwe anaghị agba nchara tank na na-akara spargers eji na bioreactors
HENGKO sintered spargers na-ewebata gas n'ime mmiri site na ọtụtụ puku pores, na -emepụta egosipụta dị obere ma karịa karịa nke ọkpọkọ gbapuru na ndị ọzọ na-efe efe ...
Dị Oké Ọnụ Ahịa Metal mkpali Nzacha - igwe anaghị agba nchara multi-oyi akwa ntupu nyo kandụl
HENGKO na-emepụta ihe nhicha n'ọtụtụ dịgasị iche iche nke ihe, nha, na akwa akwa ka ha wee nwee ike ịkọwapụta ya na njirimara na nhazi ndị ahịa ...
0.2um ka 90 micron 5 - 100mm elu ntụ ntụ ma ọ bụ waya ntupu porous sintered metal igwe anaghị agba nchara nyo tube
HENGKO igwe anaghị agba nchara nyo tube ka site sintering 316L ntụ ntụ ihe onwunwe ma ọ bụ multilayer igwe anaghị agba nchara waya ntupu na elu okpomọkụ. Enweela ha n'ọtụtụ ebe na enviro ...
Chunmiao Action HENGKO ogwu oyi yinye okpomọkụ ma na iru mmiri ileba anya usoro
Chunmiao Action bụ mmemme ịgba ọgwụ mgbochi nke COVID-19 nke gọọmentị China hiwere maka ụmụ amaala nke mba ofesi, nke na-ahụ maka ịnye ọgwụ mgbochi ụlọ ma ọ bụ nke mba ọzọ maka ụmụ amaala China nọ na mba ọzọ ugbu a. Ihe karịrị nde mmadụ 1.18 si mba ofesi China nwere ...
site ha na 21-07-13
Lee ka o si dị mkpa iji nyochaa ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri nke forlọ Ọrụ Na-emepụta baccotaba!
Anwụrụ nke sitere na South America, na-akọwanye karịa na mpaghara dị iche iche dị na mgbago ugwu na ndịda China. Ọ bụ ihe ọkụkụ na-emetụ n'ahụ maka okpomọkụ .Ọdịmma na mkpụrụ ụtaba na-emetụta oke okpomọkụ. Tobaccotaba dị elu na-achọ obere okpomọkụ n'oge mbụ na ọnọdụ dị elu karị ...
Na-akpata: China na-enye ọgwụ mgbochi ọgwụ ijeri otu ijeri.
E nyere ihe karịrị otu ijeri ọgwụ mgbochi COVID-19 na China. Ndị ọrụ ahụike na-ekwu na o were nanị ụbọchị ise iji nye ọgwụ ọhụrụ 100. O were China ihe dị ka ọnwa abụọ ịrị site na 100 nde doses ruo 900 nde doses. “China kwalitere mmepe ...
Fresh oyi-yinye lọjistik Ọ dị oké mkpa maka ọnọdụ okpomọkụ ma na iru mmiri nlekota
Ọnọdụ dị mma maka uto nke litchi ọ bụ ezie na ihu igwe dị ọkụ. N'oge ochie ， Lychees nwere nnukwu ịhụnanya site n'aka ndị eze ukwu na ndị iko nwanyị dị ka ụtụ. Dị ka ihe ndekọ ahụ si kwuo, sị: “Iko nwanyị ahụ bụ ọgwụ lychee, ọ ghaghịkwa ịmụworo ya. E bufee ya ma bufee ya ...
site ha na 21-06-26
Ọrụ ugbo na-ebi na anyanwụ!
Zingtụnanya, enwere ọtụtụ nhazi ọkwa nke ọrụ ugbo. Taa, anyị na-amụta maka ọrụ ugbo agrivoltaic. Agrivoltaics, nke a makwaara dị ka agrophotovoltaics (APV), na-arụkọ ọrụ ọnụ n'otu mpaghara ala maka ike fotovoltaic anyanwụ yana maka ọrụ ugbo. Otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị French na-eduga b ...
Copyright - 2001-2021: HENGKO.com Ikike niile echekwabara.